सोमबार, मार्च 15, 2010 शनिबार, जून १,, २०१। बिल डासन
स्पाम सामरीहरू केवल ई-मेल कुराकानीको लागि प्रयोग गर्दैनन्, तर अरूको लागि स्प्याम स्ट्याम्पिंगमा पनि योगदान पुर्‍याउँछन्। अन्तिम साताको अन्त्यमा मेरी सासुले वर्णन गरिन् कि उनले कसरी याहूलाई त्यागे! ईमेल खाता र Gmail मा सारियो, किनकि यो थियो, "सबै स्प्याम भरिएको थियो र पढ्न सकिदैन।" के उनले महसुस गरेकी थिइनन् कि यस व्यवहारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू (ISPs), मार्केटरहरू र स्प्यामरहरू सबैलाई दु: ख दिन्छ।
इन्टर्नेट सेवा प्रदायक (ISPs) तपाईंको ईमेल अनुभव सुधार गर्न प्रतिक्रियाको आवश्यकता छ। प्रयोगकर्ताहरूले गुनासोहरू लग गर्ने बिना र ईमेललाई स्पामको रूपमा मार्किंग बिना। आईएसपीहरू प्रयोगकर्ताहरूलाई दुर्व्यवहारबाट बचाउन इनपुट छैन।
धेरै आईएसपीहरू स्प्याम / बल्क फोल्डरमा सन्देशहरू पुर्‍याउने अभ्यासको शुरुआत गर्दैछ र यदि प्रयोगकर्ताहरूले तिनीहरूलाई सुधार्नुभयो भने अनुगमन। प्रयोगकर्ताको हस्तक्षेप बिना, ईमेल मार्केटर्सको प्रतिष्ठा मुद्दाहरू हुन सुरू हुन्छ, जसले उनीहरूको डेलिभरीलाई अवरोध पुर्‍याउँछ।
त्यागिएका ईमेल ठेगानाहरू मेटिएक छैनन्, धेरै आईएसपीहरू खाता पुन: दावी गर्नेछ र आपत्तिजनक प्रेषकहरूलाई जड गर्नको लागि यसलाई स्प्याम जालको रूपमा प्रयोग गर्दछ। यसले वैध मार्केटरहरूलाई जोखिममा पार्छ जसले ईमेलहरू पठाउन जारी राख्छन्, किनकि तिनीहरूलाई थाहा छैन कि खाता त्यागिएको छ।
मार्केटर्स A / B परीक्षण प्रयोग गर्दछ, खुल्छ, क्लिक गर्दछ र रूपान्तरण तिनीहरूको सन्देशहरू परिष्कृत गर्न र प्रयोगकर्ताको अ .्कमा सुधार गर्दछ। यदि तपाईं उनीहरूका सन्देशहरूबाट सदस्यता रद्द गर्न छनौट गर्नुभयो भने पनि, बजार चाहानुहुन्छ, र आवश्यक तपाईं कुराकानी गर्न।
स्प्यामरहरू केवल सन्देशहरू पठाउन चाहनुहुन्छ! तिनीहरूलाई मतलब छैन यदि यसले तपाईंको ईनबक्स वा स्प्याम / बल्क फोल्डरलाई हान्यो भने। अनावश्यक सन्देशहरूको हमलालाई बेवास्ता गरेर, उनीहरूले आफूले चाहेको कुरा पाउँछन्। प्रयोगकर्ताहरूले मात्र यी सन्देशहरूलाई चिह्नित गरी मुद्दा सुधार गर्न सक्दछ स्पाम, र ISPs लाई मुद्दामा सचेत गराउँदै।
यस कथाको मनोबलले केहि मिनेटहरू खर्च गरीरहेको छ राम्रो र नराम्रो स्प्यामको समीक्षा गर्न तपाईलाई र अन्य प्रयोगकर्ताहरूका लागि ईमेल राम्रो बनाउनका लागि। ती ईमेलहरूलाई स्प्यामर वा बजारबाट बेवास्ता नगर्नुहोस्। सदस्यता रद्द गरेर, ईमेललाई स्पामको रूपमा मार्क गर्नुहोस्, वा बल्क / स्पाम फोल्डरबाट ईमेल हटाउदै, तपाईं सबैका लागि ईमेल अनुभव सुधार गर्दै हुनुहुन्छ।
मेरो सासुलाई मद्दत गर्नुहोस्, र ईमेल विश्वलाई राम्रो स्थान बनाउनुहोस् ... स्प्याम समरिटन हुनुहोस्!
टैग: ब्रान्ड अडिटिंगCantaloupecurrentsमोबाइल ईमेल तथ्या .्कउत्पाद विकासrepinsसोमियास्वाइप सर्वेक्षण
मार्क्स 19, 2010 मा 1: 05 PM
इमेल मार्केटिङ अनलाइन मार्केटिङको सबैभन्दा व्यापक रूपमा प्रयोग हुने रूपहरू मध्ये एक भएको छ, फलस्वरूप व्यवसायहरूका लागि सबैभन्दा प्रभावकारी पनि हो। स्प्याम अहिले सामान्य छ र यो जारी रहनेछ।
के व्यवसाय मालिकहरूलाई थाहा हुनुपर्छ कि स्प्यामिंगले छोटो अवधिमा तिनीहरूको ब्रान्डहरू नष्ट गर्नेछ, यो बेकार भएको र अप्ट-इन सूचीको साथ भन्दा धेरै परिणामहरू प्रदान गर्दैन।